Midowga Yurub oo war ka soo saaray khilaafka Rooble iyo Farmaajo - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Midowga Yurub oo war ka soo saaray khilaafka Rooble iyo Farmaajo
Midowga Yurub oo war ka soo saaray khilaafka Rooble iyo Farmaajo
Midowga Yurub ayaa ugu baaqay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble inay soo afjaraan khilaafka siyaasadeed ee maalmihii dambe ciirka isku sii shareerayay.
Midowga Yurub ayaa sidoo kale bayaanka ay soo saareen ku sheegay in loo baahanyahay in geedi socodka doorashada aan la hakinin oo lagu wado si nabadgelyo leh, iyadoo la raacayo jadwalkii hore loogu heshiiyay ee 27 May.
“Waxay tani fure u tahay bad qabka dadka Soomaaliyeed. Dhammaan daneeyayaasha arrimaha Soomaaliya waa inay xakameeyaan xasilloonida guud ee Soomaaliya iyo gobolka.” Ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay midowga Yurub.
Beesha caalamka ayaa dhankeeda xalay sheegtay in khilaafka sii kordhaya ee u dhexeeya Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha uu wiiqi doono xasilloonida Soomaaliya isla markaana uu carqaladayn doono geeddi-socodka doorashada.
Previous articleRa’iisulwasaaraha Itoobiya oo eedeyn u jeediyay Mareykanka
Next articleMadaxweynaha Koonfur Galbeed oo la kulmay guddiga xaqiijinta haweenka